तपाईको हातमा पैसा नटिकेर आजित हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गरिजानुस् ! - Internet Khabar
Home Jiwan Mantra तपाईको हातमा पैसा नटिकेर आजित हुनुहुन्छ ? त्यसो भए यसो गरिजानुस् !
काठमाडौं । पैसा प्रत्येक मानिसको आवश्यकता हो। पैसाविना जीवन चल्दैन । तर कतिपय अवस्थामा चाहेर पनि पैसा बचाउन सकिन्न वा मरिगए पैसो कमिन्न। यहाँ हामी केही यस्ता उपायहरू बताउँछौं जसलाई अपनाउँदा शायद तपाईंको आर्थिक समस्या समाधान हुन्छ।
हरेक पूर्णिमा बिहान १० बजे पीपलको रुखमा देवी लक्ष्मीको वास हुन्छ । आर्थिक समस्या झेलिरहेको व्यक्तिले त्यतिखेर पीपलको वृक्षलाई पूजा गर्दा लाभ प्राप्त हुन्छ । पीपलमा जल चढाउनुस् र लक्ष्मीजीको उपासना गर्नुस् । समस्याहरू हट्दै जानेछन् ।
कुनै पनि शुभ मुहूर्त वा अक्षय तृतीया वा पूर्णिमाको दिन बिहान सबेरै उठ्नुस् । नुहाइधुवाइ गरेर रेशमको रातो कपडामा चामलको २१ अक्षता दाना बाँध्नुस् । त्यसपछि विधिविधानका साथ लक्ष्मी माताको पूजा गर्नुस् र चामलको पोको पनि चढाउनुस् । त्यो पोकोलाई पछि आफ्नो पर्समा राखेर हिँड्ने गर्नुस् । पर्समा कुनै पनि अशुद्ध कुरा नराख्नुस् । धनसम्बन्धी समस्या समाधान हुनेछ ।
पर्समा कहिल्यै पनि साँचोहरू राख्नुहुँदैन । पैसा पनि मिलाएर राख्नुपर्छ, कच्याककुचुक पारेर राख्नु हुँदैन । हनुमानजीका चरणमा मंगलवार र शनिवार तेल सिन्दूर चढाउनुस् र उहाँको शिरमा सिन्दूर लगाउनुस् । हनुमान चालीसा वा बजरंगवाण पाठ गर्नुस् ।
घरमा वा कार्यालयमा गाईअघि उभिनुभएका अनि बाँसुरी बजाइरहनुभएका श्रीकृष्णको चित्र लगाउँदा ऋण लाग्दैन र कसैलाई दिएको धन डुब्ने सम्भावना पनि कम हुन्छ । ऋणमा डुबेको मानिसले रातो लुगा लगाउने वा रातो रुमाल आफूसित राख्ने गर्नुपर्छ । भोजनमा सक्खर लिनुस्। बुधवार स्नान गरेर पूजा गरेपछि सबभन्दा पहिले गाईलाई हरियो चारा खुवाउनुस् अनि बल्ल आफूले भोजन गर्नुस् । ऋणबाट छिट्टै छुटकारा पाइन्छ। ऋण लिएको व्यक्तिले आफ्नो कन्तूरमा स्फटिक श्रीयन्त्रका साथसाथै मंगल पिरामिड राखेर दिनदिनै धूपदीप देखाएमा छिट्टै ऋणबाट मुक्ति प्राप्त हुन्छ। भारतीय वेबसाइटबाट
Previous articleमनसुनले मात्र गएको होइन बाढीपहिरो
Next articleनिषेधाज्ञा थप खुकुलो, सार्वजनिक यातायात जोरबिजोर चल्न पाउने